Akụkọ - Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd. profaịlụ
Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd. profaịlụ
E guzobere Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd. na 2011. Ọ bụ ụlọ ọrụ dị elu ọkachamara na R&D, mmepụta na ahịa nke batrị lithium. Ugbu a, ọ nwere ngalaba azụmahịa atọ: arụmọrụ batrị lithium, Ngalaba ngwaahịa mechiri, na ụdị SOSLLI nke ya. Ihe ndị dị mkpa bụ batrị lithium polymer, batrị nke dị gịrịgịrị na nke na-adịchaghị njọ, batrị lithium gbara okirikiri, ebe a na-agbanye ike ekwentị, batrị lithium 18650, batrị ụgbọ ala eletriki, batrị nickel-metal hydride na batrị ndị ọzọ. Eresịwo ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ nye ọtụtụ mba na mpaghara dị n'Eshia, Europe, North America, South America, Hong Kong na Taiwan.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị ọrụ mmepụta 1,600, ndị ọrụ 110 mara mma, yana ndị ọrụ 65 na ndị ọkachamara na ụzụ 65; Ọtụtụ n’ime ndị isi ụlọ ọrụ ahụ bụ ndị sitere na ụlọ ọrụ ụwa niile ama ama. Companylọ ọrụ ahụ nwere ahịrị mmepụta akpaaka 18650, ahịrị ntanetị na-emepụta 14500, yana ọrụ mmepụta kwa ụbọchị karịrị 100,000. Companylọ ọrụ ahụ na - arụ ọrụ ike na usoro ISO9001: 2008, ngwaahịa ya agaferela CE.MSDS.UN38.3.ROHS. asambodo. A na-eji ya mee ihe na ezé elektrọniki, ọla aka nche smart, igwefoto Bluetooth, ike ekwentị, igwe ọkụ ọkụ igwe eji eme ihe, igwe eletriki, ihe nnwale ụlọ ọrụ, ihe egwuregwu kọmputa, ụgbọ elu ahụ, ngwaahịa ndị okenye na ngwaahịa elektrọnik. Kemgbe e hiwere ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-elekwasị anya n'ịmeziwanye ogo, njikwa ọnụ na nnyefe oge. Site na arụmọrụ ọnụahịa dị mma na ọrụ dị mma, ọ meela ka ndị ahịa nweta afọ ojuju zuru oke na imekọ ihe ogologo, yana ọnụ na ndị ahịa na-aga nke ọma!
Ndị ụlọ ọrụ ahụ amatala iguzosi ike n'ezi ihe, ike na ogo ngwaahịa Shenzhen Suosili Technology Co., Ltd. Companylọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ ịzụ ahịa ugbu a na Central China, East China na South China iji nye nkwado ọrụ ọrụ elekere 24. Ndị ahịa ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ bụ: Panasonic, Philips, voltronicpower na ụdị ndị ọzọ nke mba ụwa. A na-ebuga ngwaahịa ndị ahụ na Europe, America, Australia, Africa, Asia na akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
Jiri obi oma nabata ndi ahia n’ụlọ na mba ofesi ileta ụlọ ọrụ Suo Sili maka nduzi, mkparịta ụka azụmahịa yana mmepe nkịtị!
Sili batrị Lithium Ion, Ngwunye batrị, Batrị 20ah Lithium Ion, Batrị Lithium batrị, Ibe batrị Lithium, Batrị Lithium-Ion 3.6v,